घृणा र हिंसा फैलाउने पोस्टहरूको लागि फेसबुकमा कुनै ठाउँ छैन : मार्क जुकरबर्ग | घृणा र हिंसा फैलाउने पोस्टहरूको लागि फेसबुकमा कुनै ठाउँ छैन : मार्क जुकरबर्ग |
| Tuesday 13 October, 2020
घृणा र हिंसा फैलाउने पोस्टहरूको लागि फेसबुकमा कुनै ठाउँ छैन : मार्क जुकरबर्ग
उज्यालो प्रतिनिधि October 13, 2020 प्रविधि
काठमाण्डौ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा घृणा, अपराध, सामूहिक हत्या, हिंसा र प्रलयलाई बढावा दिने पोस्टहरू बढ्दै छन् । यसलाई ध्यानमा राख्दै फेसबुकले आफ्नो नीति अपडेट गर्‍यो र भन्यो कि फेसबुकमा घृणा, अपराध, सामूहिक हत्या, हिंसा र प्रलयलाई बढावा दिने कुनै पनि पोष्ट वा सामग्रीका लागि कुनै ठाउँ छैन। फेसबुकका सीईओ मार्क जुकरबर्गले आफैंले एक पोष्टबाट यो जानकारी दिएका छन्।
मार्क जुकरबर्गले आफ्नो पोष्टमा लेखे, ‘हामी घृणा वक्तव्य नीति अपडेट गर्दैछौं। हामीले घृणा, अपराध, सामूहिक हत्या, हिंसा र प्रलयलाई बढावा दिने सबै पोस्टहरू हटायौं। यदि कसैले फेसबुकमा हलोकास्ट खोज्छ भने, हामी यसलाई सही सामग्रीमा लैजाने कोशिश गर्नेछौं। ‘
फेसबुकको यो निर्णयलाई विश्व यहूदी कांग्रेस र अमेरिकी यहूदी कमिटीले स्वागत गरेका छन् । विश्व यहूदी कांग्रेसले धेरै वर्षदेखि विश्व यहूदी कांग्रेस फेसबुकबाट हलोकास्ट अस्वीकार सामग्री हटाउनको लागि मांग गरिरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा फेसबुकको यो निर्णयले उनीहरूको मागलाई पूर्ति गर्ने छ। हलोकास्टलाई यहूदी नरसंहारको रूपमा पनि चिनिन्छ।
गलत तथा भ्रामक सन्देश प्रवाह गर्नेलाई कारवाही गरिने
अमेरिकी सरकारद्धारा गुगुलमाथि मुद्दा दायर
चीनको भय ! पाकिस्तानले १० दिन मै टिकटक
गुगलमा भएको थियो संसारको सबभन्दा ठूलो साइबर आक्रमण,
मध्यपहाडी लोकमार्गमा ‘फोर जी’सहितको सञ्चार सेवा उपलव्ध गराउँदै
आखिर सेल्फीको इतिहास कति पुरानो हो ? थाहा
गुगलको घोषणा : अब गुगल मिट प्रयोग गर्न
E = mc2 : विश्वको ऐतिहासिक थ्योरी, जुनको
दिन-रात फेसबूक चलाउनु एक्लोपनको संकेत,दैनिक १५ सिगरेट जलाउनु